ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဆိုပါ5အမျိုးသမီးများစေသည့် Big ချိန်းတွေ့မှား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 25 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
သင်နေ့စွဲများ၏ရမှတ်အပေါ်သွားနှင့်အွန်လိုင်းယောက်ျားအများကြီးစကားပြောပုံပေါက်သော်လည်းသင် connection တစ်ခုလုပ်သို့မဟုတ်သင့်သူကိုတွေ့ပုံရသည်ဘယ်တော့မှမထားပါနဲ့?
ဒါကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်ဆိုပါကသင်က ''5Big ချိန်းတွေ့မှားခြင်း 'တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလုပ်နေပါတယ်. ဒီမှာရှိတယ်5အမျိုးသမီးများစေသည့် Big ချိန်းတွေ့မှား, ဘုရားသခင်နှင့်အဘယ်အစားအပြုပါရန်.
ငါ့အမျိုးသမီး clients များ၏ဤမျှလောက်များစွာသောတစ်ခုအစီအစဉ်များဖြင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းချဉ်းကပ်နှင့်တကယ့်သူတို့နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုဆန့်ကျင်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့လူအဘို့ရှာဖွေနေပါသည်, သူတို့ကထိုလူကိုချက်ချင်းပယ်ချနဲ့ connection ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အခြားရက်စွဲအခွင့်အလမ်းမရှိဘဲပယ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်လာတယ်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါသောလူတို့သည်မည်သည့်အတွက်ချက်ခြင်းကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရကြဘူးဆိုရင် (သို့မဟုတ်မရှိခြင်းပြည်၏) နောက်ထပ်. ထိုသူတို့ကရက်စွဲအဆင့်မှမရကြပါလျှင်, ထိုမိန်းမသည်ရလဒ်များကိုကျေနပ်နှစ်ထက်နည်းနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ရက်စွဲရန်အစီအစဉ်များကိုသယ်ဆောင်.
ဒါဟာချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာအစီအစဉ်များကိုမရကြဟုပြောလွယ်အပြန်အလှန်ပုံရပေမည်, ပြီးနောက်အားလုံးဧကန်အမှန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အထိတစ်ခုလုံးအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ 'သင့်သောသူကို' 'ညာဘက်ကိုခရီးဦးကြိုဖို့ဖြစ်တယ်? အဘယ်သူမျှမနှင့်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ. နောက်ဆုံးတွင်နှင့်ရေရှည်ဤဆန္ဒသည်, သို့သော် အကယ်. အစီအစဉ်များဖြင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းချဉ်းကပ်မှုလျှင်သင်အကြီးအကျယ်ကစင်မြင့်မှရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့ချ. ကော်ဖီအဘို့အတွေ့ဆုံရန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဖွဲ့ဝင်များပတ်လည်မှာဖြစ်တဲ့အခွင့်အလမ်း - ဒီအဆင့်မှာဂိမ်းအတွက်ကြောင့်အဘယ်မည်သောချိန်းတွေ့ကြည့်ရှုဖို့ကိုဝေး သာ. ကောင်း၏, လူတန်းစားပေါင်းစုံ, ဒါကြောင့်အပေါ် chatting လုပ်နေကြတယ်နှင့်. လူမျိုးအပေါ် Come - မမင်္ဂလာဆောင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း - အိုင်တီ့ရက်စွဲရဲ့, ဒါကြောင့်တကယ့်နည်းနည်းလေးအနားယူပြီးထိုသို့သောကြောင့်ကုသကြကုန်အံ့. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအတု setting ကိုတစုံတယောက်ကိုအစည်းအဝေးမှသင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ရှိမရှိသိနိုင်ကြောင်းမျှော်လင့်ထိုကဲ့သို့သောလက်တွေ့မကျရှုထောင့်ဖြစ်သည်.
သင်သည်မိန်းမအဘို့အချိန်းတွေ့ဖို့ငါ့ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းမသိလျှင်ငါသည်သင်တို့ကိုအကြံပြုလိုပါတယ်သိရကြလိမ့်မည် ကုထုံးအဖြစ်ချိန်းတွေ့ မကောင်းတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးပုံစံများ undoing များအတွက်. သို့သော်ပိုမိုဒီချိန်းတွေ့ပျော်စရာနှင့်နှလုံးအလင်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်ထက်. သင်တို့ကိုမရှာဖွေမတွေ့ရှိအကြောင်းအစီအစဉ်များဖြင့်သွားလျှင်သင့်ရဲ့ဒီလူဖြစ်လျှင်ကတပြင်လုံးကိုအခြေအနေအပေါ်ဖိအားတစ်တန်ကိုထည့်လေ့မရှိ, ကြောင်းကို၎င်းသင်တို့ကိုအလျှင်းသင့်ရက်စွဲလည်းမအတွေ့အကြုံကိုအနားယူခံစားနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်. သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမသူလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကို drop အသစ်တစ်ခုတစေ - အသစ်ရှိသည်, ပျော်ရွှင်စရာနှင့်လူသစ်နှင့်အတူအလင်းနှလုံးအတွေ့အကြုံများ.
ပထမဦးဆုံးအကြီးမားဆုံးအမှားနှင့်အတူအမျှ, အမှား2တစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါအမျိုးသမီးများသည်ခြေအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရိုက်ကူးကနောက်ထပ်နည်းတစ်နည်းဖြစ်၏. ယနေ့ပြုလုပ်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအများစုကအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုများအောင်မှကြွလာသောအခါသူတို့ခံစားရ '' ဓာတုဗေဒ '' ကအုပ်ချုပ်ကြသည်, ငါသည်ဤသည်နောက်တဖန်ဒုက္ခအချိန်နှင့်အချိန်အမျိုးမျိုးသို့သူတို့ကိုငါရမြင်ရ. ဓာတုဗေဒတစ်ဦးသောသူသည်သင်တို့မှကောင်းတဲ့လက်တွဲဖော်ဖြစ်ပါ့မလားတဲ့ဆင်းရဲသားကိုညွှန်ပြချက်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်. အမှန်တွင်ပြင်းထန်သောဓာတုဗေဒမကြာခဏအတိတ်၌ကြီးသောဆက်ဆံရေးကရှေးခယျြမဖန်ဆင်းသောသူမိန်းမတို့အဘို့သတိပေးအချက်ပြဖြစ်ပါသည်. မကြာခဏသူတို့ကပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ဦးနှောက်အာရုံကြောများနှင့်အဆင်မပြေသောကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့၏လုံးဝသတိမမူမိရနိုင်ပြီးသူတို့ဓာတုဗေဒဌာနလာကြတယ်ပါဘူး. အမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုအဘို့အလူကောင်းတစ်ဦးနှင့်အတူအချိန်နှင့်အမျှကြီးပွားနိုင်. ဒါကြောင့်အဆင်မပြေသို့မဟုတ်ဆိတ်ငြိမ်သောယောက်ျားသည်အခြားအခွင့်အလမ်းပေး, တကယ်တော့သူ့ကိုအများအပြားအတိုရက်စွဲများပေးလျှင်သူသည်သင်တို့အဘို့အတော်သည် shell ကိုမှထွက်မလာနှင့်ဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားသို့လှည့်မပါဘူးဆိုရင်ကြည့်ရှု, ဖြစ်ကောင်းပင်ရဲ့လူကို ''. သငျသညျအခုအချိန်မှာကစိတ်ကူးနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့ (အမှားကြည့်ရှု 1).
အမှား3အမှားနှင့်ဆင်တူသည် 1 နှင့်နည်းတူထိခိုက်, ပိုမိုဆိုးရွားမလျှင်. ကျနော်အမျိုးသမီးများစွာသူတို့လိုချင်သည်ကိုအရည်အသွေးတွေကို၏ trusty '' စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း '' ရှိသည်ကိုသိရ (သို့မဟုတ်သူတို့လိုချင်တဲ့ထင်) လူမှာ. သင်သည်သင်၏စံပြမိတ်ဖက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အတွက်လိုချင်တာတွေအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့မှားဘ​​ယ်အရာမျှမရှိပါ, သို့သော်ထိုသူအချို့တို့သည်အကြွင်းမဲ့ဒဏ္ဍာရီများနှင့်လုံးသင်ထမ်းဆောင်ကြသည်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းများနှင့်အတူအဖြစ်မှန်သို့ရပါစေနှင့်!
အဆိုပါစာရင်းကိုမကြာခဏအလွန်ရှည်လျားသည်နှင့်များသောအားဖြင့်အမှန်တကယ်မိမိတို့နှင့်အတူတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ထိုအရပ်၌အပေ​​ါ်အမှုအရာရှိတယ်! ဥပမာအားဖြင့်သူမဘေးမှာ '' အသည်းအသန်နှင့်တက်ကြွ '' ရန် 'အေးဆေးနဲ့ကျောချထား' 'ရှိစေခြင်းငှါ. ယခုငါသည်သင်တို့ကိုလူတစ်ဦးတွင်ရှိသူအပေါင်းအရည်အသွေးတွေကိုမပေးနိုင်သည်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်သာမန်အားဖြင့်လူတဦးကအခြားတဦးသို့ဦးတည်လေ့င်. ဒါကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်? ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းများကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဒါကြောင့်အသေးအဖွဲဖြစ်ကြောင်းအပေါ်အမှုအရာရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သော '' တက်တူး 'သို့မဟုတ်' 'ကြွက်သားများ' အဖြစ်. အမျိုးသမီးတွေအတွက်လာကြ! ဘာမှမမှားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက preferences ရှိခြင်းဒါပေမယ့်သင်တကယ်သူသည်မိမိအခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မင်ရှိပါတယ်ရှိမရှိပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရွေးချယ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အတွက်ရှိပါသည်? သင်သည်ဤသင်သည်သင်၏အသက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးကရောက်စေသောထင်သလား? အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်အရေးပါသူများအရည်အသွေးများနှင့် ပတ်သက်., ထိုကဲ့သို့သောရိုးသားမှုအဖြစ်, သစ္စာရှိခြင်း, ကြင်နာမှု, ခွန်အား (စိတ်ကို) နောက် ... ပြီးတော့?
မိန်းမတိုင်းဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အဘယ်သို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိပါတယ်. သို့သော်အချိန်နှင့်အချိန်တဖန်ငါစာရင်းထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်နောက်ဆုံးတွင်သူမ၏ဘဝလက်တွဲဖော်တွေ့သောအခါနှင်ထုတ်ရမြင်ကြပြီ, သူကများသောအားဖြင့်သူမ၏စာရင်းတွင်ခဲ့လူအားလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်! ထိုမိန်းမသည်မင်္ဂလာရှိ၏. ဒါကြောင့်ငါ့အကြံဥာဏ် - စာရင်းတွင်န့်ပစ်! သို့မဟုတ်, သင်ရှိရမည်လျှင်, ရုံ၏အမြင့်ဆုံးကခုတ်လှဲ5အရေးကြီးဆုံးအရည်အသွေး. အထွေထွေလမ်းညွှန်မဟုတ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်.
ဒါကြောင့်သင်ဟာနောက်ဆုံးမှာသင်ကြိုက်သူတစ်ဦးဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်, သငျသညျအထဲကရက်စွဲတစ်ခုပေါ်မှာသူနှင့်အတူရှိသောနှင့်သင်တို့ဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရ. သို့ဖြစ်. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုကြပါ? သင်သည်စကားပြောဆို. စကားပြောခန်းကိုကွက်လပ်တစ်ခုရှိလျှင်သင်ကဖြည့်စွက်. သင်ဘယ်မှာလာမယ့်သွားကြဖို့အကြံပြု, သင်ခဲ့ကြရ Adventures ၏ပုံပြင်များနှင့်အတူသူ့ကို dazzle, သူ့ကိုသင်၏ sparkling နှမ်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်သင်နဲ့ဟာသကျော်ချုပ်အထံတော်၌ရှိသည်. နှင့်သင်တန်းကိုသင်တို့အားရက်စွဲသင့်ရဲ့ထက်ဝက်အဘို့အဆပ်ဖို့ကိုဆက်ကပ်, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းခင်ဗျားကိုတောင်တပြင်လုံးကိုဥပဒေကြမ်းအရ - သင်ပြီးနောက်အားလုံးခေတ်မီသောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကို. ကြီးစွာသောယ့်! သူသည်သင်နှင့်အတူရယ်မောနေသည်, နှင့် connection တစ်ခုရှိပါတယ်, သင်ကခံစားနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့, ထို့နောက်သူခေါ်ဆိုဘယ်တော့မှမ. သူကရက်စွဲများ၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်အအေးသွားကွယ်ပျောက်တော့. ဒါနဲ့ဘာမှားသွားတယ်?
ကောင်းပြီအများစုကိုအမျိုးသားတွေချိန်းတွေ့အတွက်ပုလ္အခန်းကဏ္ဍကိုယူကိုနှစ်သက်, သင်တို့ရှိသမျှသည်သို့မဟုတ်အပေါ်ကမဆိုလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်နှင့်သင်အမှန်တကယ်ဤအခန်းကဏ္ဍတွင်များထဲကသူ့ကိုတွန်းအားပေးနေကြသည်, သင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခံရမှုမှသူ့ကိုကာကွယ်နေကြတာပါအနက်အဓိပ္ပာယ်. သူတို့အချို့ကြိုးပမ်းမှုတွင်ထားရန်ရှိသည့်အခါအမျိုးသားများရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကတိကဝတ်စိတ်ခံစားမှု tripped ရ. သင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အများဆုံးလူတို့နှင့်အတူရေရှည်တွင်ဝေးသင်တို့သည်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသို့သော်နှစ်သက်ဖွယ်နေကြတယ်ထင်ကြပေမည်. သူသည်သင်နှင့်အတူအချိန်ကိုမွေ့လျော်စေခြင်းငှါ, သူသည်သင်နှင့်အတူရယ်မောစေခြင်းနှင့်ပင်တစ်စက္ကန့်နေ့စွဲရှိစေခြင်းငှါ, သို့သော်သူတစ်စုံတစ်ဦးမှကျူးလွန်ကိုအဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိသည် - သူပိုပြီးအားထုတ်ကြိုးပမ်းထားရန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအခြား '' ပိုခက် '' သောမိန်းမ.
သူကစကားပြောဆိုဦးဆောင်တဦးကိုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်, သင်တို့နှင့်နေရာအကြံပြု entertaining. သင်သည်သူ၏နက်ရှိုင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့လိုပါလျှင်သူ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်နောက်လိုက်ဖို့လုံလောက်ခိုင်မာပါစေသတည်း. ဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အစားအတွေ့အကြုံမွေ့လျော်လေ့ကျင့်.
5. တစ်ခုရေခဲပြင်မိန်းမများကို Be
ရေခဲသမီးကညာဖြစ်ခြင်းခက်လွန်းကြိုးစားနေဖို့တစ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်. တချို့အမျိုးသမီးတွေအမှားအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. သိ4ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြားအစွန်းယူလွန်းအေးတိအေးစက်နဲ့မရနိုင်ဖြစ်လာ. သူတို့ '' ရရန်ခဲယဉ်း 'နဲ့' အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး '' အဘို့အသွားနိုင်ပေမဲ့, ဝေးလွန်းသိမ်းယူလျှင်ဤချဉ်းကပ်သင် uninterested ဖြစ်ကြောင်းချွတ်လာနိုင်ပါသည်, မရနိုင်, စာရင်းနှင့်ပင် snobby. ဒါဟာများသောလူတို့အားတစ်ဦး bit နဲ့အအေးခံစားနိုင်ပါတယ်, ဆုံးနဲ့ယောက်ျားတစ်ဦးသည်ရေခဲသမီးကညာနှင့်အတူလှပသောလျင်မြန်စွာအပ်မည်, ထို Chase ရဲ့စိန်ခေါ်မှုအတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားနေသောသူတို့အား၎င်း မှလွဲ., နှင့်သင်တော်မူသည်ကိုအလိုရှိကျော်တစ်ချိန်ကသင် drop နှင့်အခြားသောမိန်းမအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့အလားအလာဖြစ်သကဲ့သို့လူသည်ဤအမျိုးအစားချင်ကြဘူး.
ထိုသူကိုပြန်ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဆဲစိတ်ဝင်စားနှင့်ပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်း / ချထားခံရအကြားချိန်ခွင်ရှိလိုအပ်ပါတယ်. သင်သည်ဤဟန်ချက်ညာဘက်ရနိုင်လျှင်သင်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူတစ်ဦးသည်ကြီးစွာသောအချိန်ရပါလိမ့်မယ်. သတိရဖို့ကိုအဓိကအရာပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်သည်. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွင်းကယ့်ကိုခိုင်မာရယူပါနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအတွက်အဆင်ပြေမရ. ချိန်းတွေ့တကယ်တော့ဒီနှင့်အတူသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါ!
ဒါကြောင့်ထွက်ရရှိသမျှတို့အပေါ်မှာသွားလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချိန်းတွေ့ခြင်းမယူကြဘူး. သင့်အနေဖြင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အသွားသလဲဆိုတာသိဘယ်တော့မှမ. ပျော်စရာ '' အလေ့အကျင့် '' ကဲ့သို့ဆက်ဆံပြီးသင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.